TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Jan 7, 3
Barnaamujka Caaw ka baxaya Radio Xoriyo waxuu ka kooban yahay.
Baaq Nabadeed oo ay Jabhada wadaniga Xoreenta Ogaadenya ugu baaqayso Shacabka walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaanka Salaxaad.
Shir ay yeesheen Gudiga Fulinta JWXO oo lagu gudoon siiyay Ciidanka Xorenta Ogaadenya Shahaado Sharafta Koowaad ee Shacbiga Ogaadeenya.
Shirsanadeedkii Xubnaha Ameerika oo soo gababa gaboobay waraysiyo aanu kasoo qaadnay iyo warkii oo ka kooban Qodobadan Hoose.
Dagaalo lagu naafeeyeey Ciidamada Cagajiidka Itoobiya.
Rabshadihii ka biloowday Labada kaniisadood ee Magale oo wali socda.
Dawlada Itoobiya oo ku dhawaaqday in ay Baadrool ka iibsan doonto Suudaan.
Saraakiil Itoobiyaan ah oo ku dhintay Agagaarka Magaalada Garoowe.
Madaxwaynaha Jabuuti oo Canbaareeyay Dilkii loo gaystay dhakhtarada maraykanka ee ku sugnaa Yemen.
Madaxwaynaha Dawlada Soomaaliya oo ku eedeeyay Itoobiya falal Argagixiso.
Ciidamada Jabhada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya ayaa weeraro isdaba joog ah ku qaaday qaar kamid ah fadhiisimaha Ciidamada Cadawga Itoobiya ay ku leeyihiin Ogaadeenya.
Dagaaladan ayaa aad loogu naafeeyay Ciidamada Nacabka Gumaysiga Itoobiya Naf iyo maaalba.
Waxayna ka dheceen goobahan.
27/12/02 Ciidamada Xoreenta Ogaadeenya ee sida gaarka ah u tabab baran ayaa Gubay Baabuur ay lahaaayeen Ciidamada Cadawga Gumaysiga Itoobiya oo Marayay Ceel Xaar oo u jirta magaalada Qabridahare 7 km. Baabuurkaaas ayaa lasheegayaa in ayna waxba ka bixin Ciidamadadii Guamasiga ee saaraa kadib markuu halkaas ku basbeelay.
31/12/02 Dagaal Gaadmo ah oo ay ku qaadeen Ciidamada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya fadhiisimada ay ku lahaayeen Ciidamada Dulmiga ku dhisan ee Itoobiya meesha lagu magacaabo Kabouga waxaa cadowga lagaga dilay 10/Askari waxaana lagaga dhaawacay 12/kale.
1/1/03/ dagaal ay ku qaadeen Ciidamada Geesiyiinta Xoreenta Ogaadeenya, Ciidamada Doolka Itoobiya oo ku sugnaa meesha lagu magacaabo Baraajisaalle oo ka tirsan Gobalka Qoraxay waxaa Ciidamada Cadowga Itoobiya lagaga dilay 6/askari waxaana lagaga dhaawacay 12 Askari oo kale.
4/1/03 waxay Ciidamada JWXO ku dileen magaalada Gurdummi Laba nin oo Basaas u ahaa Ciidamada Nacabka Gumaysiga Itoobiya, Labadaas nin oo lagu kala magacaabi jiray
Ibraahin Cabdi Qubulle. Iyo Xiirey Faarah. Ayaa si baarinimo ah ugu adeegi jiray Ciidamada Dulmiga iyo xaqdarada ku caanbaxay ee Gumaysiga Itoobiya.
Dagaaladan loo gaystay Ciidamada Cadawga Itoobiya waxay sababeen in ay Ciidamada xoreenta Ogaadeenya ka sifeeyaan goobihii ay isku balaadhiyeen Ciidamada cadawgu iygaoo isku uruursaday Dhawr magaaaalo oo waaweeyn oo ka mid ah magaalo madaxyada Gobolada.
Tirada dhimashada ee rabshadaha mekkele ayaa sii batay iyadoo haatan 5 qof ku dhinteen tobaneeyo kalena ay ku dhawacmeen dagaalo dhex marayey Laba koox oo ka kala socda Laba kansiisad oo masiixi ah. Wararka naga soo gaaraya magaalada mekkele ayaa sheegaya in Ciidanka Booliska ay damceen in ay dagaaladaas dhex galaan lakiin ay taasi keentay in Labada dhinac ee dagaalmaya ay ka soo hor jeedsadaan Booliska oo ay ku eedeyeen in ay caruur arday ah xabado ku fureen. wararka waxay intaasi ku darayaan in Isbitaalka weyn ee mekkele uu haatan dhaawac ka buuxo magaaladana ay dhex marayaan Ciidan Boolis iyo qaar kamid ah Milatariga ay hogaamiso EPRDF.
Dawlada Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in waxii hada ka danbeeya ay Boqolkiiba 85% Baadroolka dibada ooga yimaada uu ka iman doono Wadanka Suudaan. Heshiiskaas Cusub ayaa lagu dhawaaqay kadib markii Albaabada loo laabay Shirkadii Calub Gas oo ay Dawlada Itoobiya u samaysay ka faa,iidaysiga Shidaalka Ogaadeenya. Shirkada Calub gas ayaa la xidhay kadib markii ay dib uga joogsaden Shirkadahii Caalamiga ahaa ee wax ka qaban lahaa soo saarida Shidaalka Ogaadeenya. Shirkadahaas ayaa Cadeeyay in uusan sugneen amaanka koobaha Shidaalka iyo in aan la aamini karin xukuumad haatan ka talisa Itoobiya.
Waxaa muuqata in ay Dawlada Itoobiya ka rajo beeshay u hanqaltaagii khayraadka Ogaadeenya, kadib markay xaqiijisay jabhada wadaniga Xorenta Ogaadeenya in ayna ka faa,iidaysan karin khayraadka dhulkooda cid uusan shacbiga Ogaadeenya ka raali aheen.
Sargaal ka tirsan Ciidanka sirdoonka Itoobiya oo waayahan danbe ku sugnaa Magaalada Eldoret oo ah goobta uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ayaa ku dhintay Agagaarka Magaalada Garoowe isaga oo ku jira hawlgal ka mid ah kuwa ay Ciidamada sirdoonka Itoobiya ka fuliyaan Soomaaliya.
Sargaalkaas oo lagu magacaabi jiray Gebre ayay Miino ku qaraxday Baabuurkii uu saaraa, waxaana waheliyay 5 Sargaal oo Ciidamada Itoobiya ka tirsan oo iyguna goobtaas ku dhintay.
Inkasta oo ay Xukuumada Itoobiya si dagdag ah u qaaday maydkii Gebre si ay u qariso faragalinta ay ku hayso arimaha Soomaaliya Gude iyo dibadba hadana waxaan Ergooyinka Soomaaliyeed ee uu shirku uga socdo Magaalada Erdoret ka qarsoomeeynin Dhimashada Gebre oo aad uga dhexmuuqan jiray Goobaha shirarku uga socdaan.
Dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in Isbitaalka Boosaaso ay yaalaan Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku dhawacmay dagaalo ay ku tageerayeen Cabdullahi Yusuf. Ciidankaasi ayaa la filayaa in dib loogu celin doono dhaawacooda Itoobiya.
Madaxweynaha dowladda ku meel gaarka soomaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa 3da Bishan january ku eedeeyey dowladda Itoobiya in ay ka dambeysay dilkii dhawaan Hargeysa ka dhacay oo lagu dilay nin uu dhashay dalka switzerland, dagaalada sokeeye ee ka soo cusbonaaday waqooyi bari soomaliya iyo gobolka Bay iyo nabadgalyo xumida ka taagan magaalada Muqdisho.
Madaxweyne cabdiqaasim waxuu shacabka soomaliyeed ogu baaqay in aysan iska indha tirin faragelinta cad ay Itoobiya ku hayso arrimaha soomaliya iyo sida ay Itoobiya ugu mashquulsantahay in ay dowlado shisheeye ah ka dhadhiciso in ay weerar ku qaadan dalka soomaliya, iyada oo caalamka oo dhan u sheegta in ay soomaliya saldhig u tahay kooxo argagixiso caalami ah, lakiin ay xaqiiqadu tahay in ay Itoobiya tahay dalka argagixisada ka wada geeska Afrika.
Dhinaca kale madaxweyne Cabdiqaasim waxu oogu baaqay kooxaha ku dagaalamaya waqooyi bari soomaliya in ay danta umada ka hor mariyaan dantooda gaarka ah isaga oo isla markaasi muujiyay in ay Itoobiya labadaasi kooxo mid ka mid ah siiso hub, Sahay iyo Askar Itoobiyaan ah oo loo adeegsado in ay laayaan shacab soomaliyeed.
Madaxweynaha Jabuuti, mudane ismaciil cumar geele ayaa todobaadkii hore si kulul u Cambareyay dilka loo geystay 3 dhakhtar oo mareykan ah oo ku sugnaa dalkaasi Yemen. Dilkaasi ayuu madaxweynaha Jabuuti ku tilmamay in ay tahay fal argagixiso isla markaasna ay dowladda jabuuti ka soo hor jeedo falalka noocaasi ah.
dilka 3daasi dhakhtar ee mareykan ah oo lagu dilay dalkaasi Yemen todobaadkii hore ayaa la filayaa in ay ka dambeeyeen kooxo argagixiso Caalami ah.
Shahaado Sharafta Koowaad ee Shabka Ogaaadenya oo la Gudoonsiiyay Ciidanka wadaniga Xoreenta Ogaadeenya.
Go�aankii Guddiga Fulinta
Laga soo bilaabo jiritaanka aadamaha waxaa jirtay gardaro ahaan qayb addoonsata Bulshada inteeda kale ama qawmiyad kale. In qawmiyad qawmiyad kale ka qaaddo xuuqdooda aayo ka talin waa nooc addoonsiga ugu xun ah. Hase ahaate mar kasta waxaa jiray quwad Af ama Addinba kaga soo horjeedda gumeysiga iyo addoonsiga, taas oon ku qanacsanayn inay ka hooseeyaan aadame qayrkood ah oo sidooda Aabe iyo hooyo dhaleen.
Markii ay Afrika gumeystayaalkii Yurub soo galeen dabayaaqadii qarnigii 19aad waxay daawo la yeesheen taliskii Xabashida si dalalka Geeska Afrika, iyada oo ay is gargaarayaan, loo qaybsado. Ogaadeenya waxay ka mid ahayd dalalka Xabashidu xoogga ku qabsatay. Shacabkan Ogaadeenya oo hiddo iyo dhaqan u lahaa geesinimo xad dhaaf ah iyo iska difaaca gumeysiga markiiba waxay kala hortageen halgan gumeysi iska-Caabin ah.
Halganka ay maanta hogaaminayso Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya (JWXO) wuxuu ku abtirsadaa taxanaha halganka gobonimadoonka shacabka Ogaadeenya ay hoggaaminayeen, Daraawiishtii; SY L; Nasrullaahi; iyo Jabhadda Xoreynta Soomaali Galbeed. Markastana waxaa la soo dersayey turunturooyin iyo hakis.
Burburkii Jamhuuriyadda Soomaali iyo dagaal sokeeyihii ka holcay Geyiga Soomaali waxay keentay niyad jab iyo rafaad nololeed. Iyaga oo ku salaynaya aragtidooda xaaladda Geeska Afrika ka jirta dadweynaha Ogaadeenya iyo kuwa saadaaliya mustaqbalka waxay ku qiyaaseen inayna awood gumeysiga lagaga hortago jirin. Waxaa duruuftaas iyo dareenka la xidhiidha ka faa�iidaystay gumeysatadii Itoobiya iyada oo u malaynaysa inuu halgankii gobonimadoonka Ogaadeenya soo afjarmay.
Sidii caadada ahayd waxaa fikirka noocaas ah beeniyey geesiyiinta Jabhadd Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya. Iyada oo ku dhaadanaysa Ciidanka Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya (CWXO) waxay ciidda Ogaadeenya dusheeda sudhay shacaarka xorriyadda iyo inayna marna qumeysiga u sujuudaynin.
Waxaa Geeska Afrika laysla qiray inay geesiyaasha CWXO guulo waaweyn ka soo hoyiyeen goobta dagaalka. Waxay laba dhagax dhexdood geliyeen Ciidanka cadowga gumeystaha iyo qawlaystayaalka uu ku adeegto. Taas oo khalkhal gelisay ciidankii cadowga oo gaadood iyo amar diido joogta ah ku jira iyo maamulk ku sheegii Jigjiga. Wuxuu muujiyey adkaysi iyo karti fulinta waajibaadka qaran si loo gaadho ahdaafta JWXO oo ah in shacabka Ogaadeenya laga saaro mugdiga Gumeysiga loona horseedo ilayska xornimada.
Sidaa darteed, shir uu yeeshay 31/12/02 Gudiga Fulinta Jabhadda oo uu guddoominayo M/weynaha Jabhadda, Adm. Maxamed Cumar Cusman, markuu qiimeeyey hawl galadii sanad 2002, wuxuu go�aan ku gaadhay inuu CWXO mutaystay shahaado sharafta 1aad ee shacabka Ogaadeenya taas oo ka marqaati kacaysa kalsoonida Jabhada iyo masuuliyiintu ku qabaan sooma jeedsadayaalka Ciidanaka Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya.
Baaq Sokeeye oo ku wajahan Shacbiga walaalaha ah ee ku dagaalamaya Degaaanka Salaxaaad.
Sida ay taariikhdu sugayso, shucuubta gobolka Geeska Afrika oo dhamina marag ka yihiin cadawga kaliya ee shacbiga Soomaalida Ogaadeenya gaar ahaan iyo ka umada Soomaaliyeed guud ahaan ee ay leedahay waa Gumaysiga Itoobiya. Kaas oo tab walba u adeegsaday sidii uu oo gu geysan lahaa xasuuqa, cadaadiska iyo duleynta shacbiga
Soomaalida Ogaadeenya ee uu gumaysto. Xaaladaha guracan ee adoonsiga Itoobiya kula dhaqmo shacbiga Ogaadeenya waxaa ka mid ah dhagarta duqowday ee �qaybi oo xukun� si cududa iyo awooda wax iska caabinta shacbiga ay u diciifto, dabeedna uu uga nasto dharbaaxooyinka gobanimodoonka.
Taliska TPLF/EPRDF ee dambiilaha ah waxa uu 10kii sano ee oo gu dambeysey kordhiyey shirqoolada isku dirka iyo kala dilka shacbiga Soomaalida Ogaadeenya ee walaalaha ah iyo siyaasadihiisa ku dhisan hurinta aanooyinka dadka walaalaha ah ee uu gumaysto iyo kuwa dariska la ahba. Sida, Oramada dheexdeeda iyo Soomalida Ogaadeenya iyo Jamhuuriyada Soomaaliya. Jilaafooyinka taliska Addis Ababa uu u dhigey Shacbiga Soomaalida Ogaadeenya waxaa oo gu dambeeyey dagaalka sokeeye ee ka socda degmada Salaxaad ee Gobolka Nogob oo keenay dhimasho, dhaawac iyo khasaaro hanti badan.
Haddaba, JWXO iyada oo ka xun dhiiga bilaashka ku daadanaya iyo is-dilka dadka walaalaha ah ayey oo gu baaqaysaa dhamaan madax dhaqameedyada, culumada diinta, aqoonyahanada iyo indheer-garadka beelaha walaalaha ah ee dagaalada sokeeye dhex mareen inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalka micna la�aanta ah ee khasaaraha dhimasho, dhaawac iyo maalba keenay. Qadiyaana haada iyo hororka Addis Ababa oo u talgalkiisu yahay baabi�intooda. Iyada oo ciidanka, hubka iyo hantida shacbiga Ogaadeenya ay haboon tahay in lagu wajaho Gumaysiga Itoobiya oo kaliya si cimrigiisa loo soo koobo. Gebagebadii, waxa ay JWXO ku bararaarujinaysaa in labada dhinacba soo afjaran colada sokeeye is hakasho la�aan ah. Sida ay dhaqanka iyo caadada u ahaan jirtayna ay arimaha ay isku hayaan ku xaliyaan wada hadal iyo xasilooni. Mareeg kasta uu Gumaystaha Itoobiya uu u dhigo shacabka Ogaadeenya wuu ka guulaysan; isaguna wuu ku hungoobi.
Hogaanka Warfaafinta, Jabhada Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya.